Milaza Ny Vondrona Media Thailandey Fa Mety Hitarika Ho amin’ny Fifehezan’ny Governemanta Tanteraka ny Media ny Volavolan-dalàna Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2017 16:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, English, English
Naparitak'ireo mpanao gazety Thailandey tao amin'ny media sosialy ity sary momba ny fehezan-dalàna manafay ao amin'ny volavolan-dalàna ho an'ny media ity. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny SEAPA
Ao anatin'ny fahavitsian'ny fanehoana firaisan-tsaina, niara-dia ireo fikambanana haino aman-jery isan-karazany mba hanoherana ny volavolan-dalànan'ny governemanta izay atahorana hanimba bebe kokoa ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny firenena.
Novolavolain'ny Fikambanana Manaika Fanavaozam-pirenena ny volavolan-dalàna “Fiarovana ny Zo sy ny Fahalalahana, Etika sy ny Fenitra Arak'asan'ny Media”. Rehefa avy nandinika ny votoatin'ny volavolan-dalàna, dia nampitandrina ny vondrona media sy ny mpikatroka fa mety hitarika fifehezan'ny fanjakana tanteraka ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny firenena izany.
Takian'ny volavolan-dalàna ny mpanao gazety hahazo fankatoavana lisansa amin'ny maha mpiasan'ny media matihanina azy ireo. Ho apetraka ihany koa ny Filankevi-pirenena ho an'ny Media Matihanina mba handrindra ny haino aman-jery sy handray ireo fitarainana mitory ny haino aman-jery. Ahitana mpikambana 13 ny filankevitra voalaza, ka ao anatin'izany ny sekretera maharitra efatra avy amin'ny minisiteran'ny fitantanam-bola, ny kolontsaina ary ny toe-karena nomerika, miampy ny solontena avy amin'ny biraon'ny praiminisitra.
Nilaza ireo mpanohana ny volavolan-dalàna fa hampiroborobo ny asa fanaovan-gazety mandray andraikitra izany, saingy niampanga izany kosa ireo mpitsikera noho ny fahitan'izy ireo fa hametraka sivana ataon'ny fanjakana izany.
Naka fahefana ankeriny ny tafika Thailandey tamin'ny taona 2014. Nampanantena hametraka fitondrana sivily izy rehefa namolavola lalàmpanorenana izay niantoka ny herin'ny miaramila any amin'ny fanjakam-birao. Na dia teo aza ny fanesorana ny lalàna miaramila, mbola arahin'ny tafika maso akaiky ny fampahalalam-baovao Thailandey.
Vondrona media eo amin'ny 30 eo no nanasonia ny fanambarana mitsipaka ny volavolan-dalàna:
Manohitra ny voalazan'ny Lalàm-panorenana (nolaniana tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin'ny Aogositra) izay mampiroborobo ny fifehezan-tenan'ny haino aman-jery tsy misy fitsabahan'ny fanjakana izany. Ny volavolan-dalàna amin'ny endrika ankehitriny dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny adidin'ny haino aman-jery hanara-maso akaiky ny fahefam-panjakana sy ny zon'ny vahoaka hahalala.
Niahiahy i Chakkrit Permpool, filoha teo aloha tao amin'ny Fila-kevi-pirenen'ny Gazety ao Thailandy fa mety hanamafy ny didy jadona ao amin'ny fiarahamonina ny volavolan-dalàna:
Ao anatin'ny fanjakana didy jadona ihany no ahitana ity karazan-javatra ity. Manohitra ny lalàmpanorenana vaovao lany tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka izay miantoka ny fahalalahan'ny haino aman-jery sy ny fahalalahann'ny vahoaka hiteny izany.
Namoaka lahatsoratra manohitra ny fisian'ny manampahefam-panjakana ao anatin'ny rafitra asa fanaovan-gazety ny Bangkok Post:
Tsy anisan'ny fahalalahan'ny gazety velively ny fisian'ny governemanta ao anatin'ny rafitra fanaovan-gazety sy ny fanomezana lisansa mpanao gazety. Ny haino aman-jery sy ny vahoaka tompoiny dia mahavita manohy mitondra fanavaozana ho an'ny asa fanaovan-gazety, izay tsy mbola nitsahatra hatramin'izay.
Ny fampahalalam-baovao, ny fivoaran'ny fomba fijerin'ny vahoaka sy ny fiarahamonina mivoatra hatrany no miantoka fa hitohy ny fanavaozana ny gazety, ary tsy afaka hanatsara kokoa izany velively ny fanaraha-maso ataon'ny governemanta .
Mandrisika ny fanjakana ny mpanao gazety Thailandey mba handinika indray ny volavolan-dalàna. Nanasa ny vahoaka ihany koa izy ireo mba hanohana ny fanentanana ao amin'ny media sosialy amin'ny alalan'ny famoahana sarina voromailala mifatotra (jereo ny sary eo amin'ny farany ambonin'ny lahatsoratra) izay maneho ny fanampenam-bava ny asa fanaovan-gazety.
Namoaka fanambarana ho firaisankina amin'ny fanentanana karakarain'ny mpanao gazety Thailandey ihany koa ny Fikambanan'ny Gazety Azia Atsimo-Atsinanana:
Ilay antsoina hoe volavolan-dalàna fanavaozana ny haino aman-jery dia afaka mampihatra fifehezana tanteraka ny gazety Thailandey- tsy ny fampahalalam-baovao ihany fa ny mpanao gazety ao amin'ny firenena ihany koa. Fihemorana 20 taona mahery tamin'ny dingana fanavaozana ny haino aman-jery ihany koa izany izay nitoloman'ny fiarahamon'ny mpanao gazety Thailandey hanalalahana ny sehatry ny haino aman-jery manoloana ny ampihimamban'ny fanjakana, sy ho an'ny fimaroan'ny sy ny fahazoam-baovao.